समिक्षामा: अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदको मिरिक सम्मेलन
२०७५ पौष ५ बिहीबार १०:०३:२४ खाेजराज गाेले
यसरी तामाङ राष्ट्र भएकोले तामाङको परिषद् हुन सक्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ हुँदैन । नेपालको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भन्नाले तामाङ, मगर, गुरुङ र थारु बीचको भन्ने अर्थ दिन्छ तर मिरिक सम्मेलनमा भने परशुराम तामाङ आफै,तामाङ राष्ट्र र नेपाल चाहिँ देश भन्दै थिए तर संस्थाको नामले चाहिँ तामाङ एउटा जाति मात्रै र नेपाल नै राष्ट्र भएको तर्वmको पक्षमा उभिएको थियो । ती तर्कहरु हामी तामाङ राष्ट्र भनेर दाबी गर्नेहरुको विपक्षमा थियो ।
परिषद् गठनको क्रममा बाह्य प्रचलनको अन्धो अनुसरण गर्न खोजेको देखिएको छ । काठमाडौंमा भएका कार्यक्रमहरुमा समेत एस.सि.आर.सि.ले ‘‘तामाङ संस्था गठन प्रक्रिया’’को पक्षमा वकालत गर्दै आएको हो । यसैले विधानमा शाब्दिक रुपमा समेत व्यापक सुधार गर्न आवश्यक देखिएको छ । संस्कार संस्वृmति निर्देशिकालाई हेर्ने हो भने, संस्कार र संस्वृmतिको अर्थ र परिभाषा नै थाहा नभएको जस्तो देखिएको छ । संस्कारको पक्षहरु समाविष्ट गरिएका छन् । पूर्र्णताः दिन आवश्यक छ तर संस्वृmति र चाडपर्वका कुरा समाविष्ट छैनन् । यस्तो आफै अस्प्रष्ट निर्देशिकाले तामाङलाई जनजातिको रुपमा पनि राख्न नसकेको जस्तो लाग्न सक्छ । तामाङ चौथो विश्व प्रथम राष्ट्र भएकोले जन्म देखी मृत्युसम्म र वर्षका ३६५ दिनकै व्याख्या रेहेको छ । हाम्रो भूमीको ज्ञान नै हाम्रो ज्ञान हो । यस्ता पर्यावरणीय देखी जीवन पद्धतीका कुराहरु निर्देशिकामा समाविष्ट हुनुपर्दछ । कथित आधुनिक राज्यसत्ता स्थापना अघि तामाङको आफ्नै सम्पूर्ण व्यवस्था कायम थियो । त्यस्ता विषयका लागि सम्बन्धित, बोम्बो, तम्बा, लामा, चोहो र ह्युल्बासँग व्यापक अन्तरक्रिया गर्न सक्नु पर्दछ । त्यसमा विषय विज्ञहरुको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रकाशकको पक्षमा : शीर्षक सहित एस. टी. लामाले ‘‘…अबौध र असामायिक रीतिको साथ छोडन सक्दैनन् भने त्यो पनि केवल रुढीवादी पाल्नु मात्रै हुनेछ’’ भनेको छ । उनी आफैले ‘‘हाम्रो पुर्खाहरु जीवन्त भईरहनेछ भने भावी पिँडीलाई जातीय शैलीमा आपूmलाई उभ्याउनु ठूलो मद्द मिल्ने छ’’ भनेको छ । यसप्रकार परिषद्को टिम आफै अस्पष्ट रहेका भन्ने प्रमाणित गरेको छ । सोही निर्देशिकामा हेर्ने जाँदा– संस्थापक अध्यक्ष परशुराम तामाङले चाहिँ ‘‘बौद्धधर्म, बोम्बोबाद र ताम्बाबादको अपूर्व समिश्रण हाम्रो तामाङ संस्कृतिका मूल आधार हो’’ भनेका छन् । यही दाबीलाई एम. एस. बमजनले पनि उल्लेख गरेका छन् । निर्देशिकामा ‘‘तामाङ जाति लामावाद, ताम्बा र गान्बावाद’’ जस्ता शब्दहरु परेका छन् । यो भनेको दार्शनिकीको दरिद्रताको उदाङ्गो उदाहरण हो । विधानले तामाङको परिभाषा लगाएको छ तर ‘‘परम्परादेखि हिन्दू वर्णव्यवस्थाको संरचनाभित्र नपर्ने विश्वका कुनै पनि ठाउँमा बसी तामाङ जातिको परम्परा, रीतिथिति, संस्कार–संवृmति पालना गरी तामाङ वंशज भई/आफुलाई तामाङ हुँ भनी स्वीकार गने जातिलाई जनाउँछ’’ भनेको छ । यहीनेर एस.सि.आर.सि.लेको दावाी छ हामी चौथो विश्व, प्रथम राष्ट्र भएकाले हामी उक्त परिभाषाको विपक्षमा छौ । हामीलाई पहिचान र गौरव दिलाउन कसैसंग तुलना गरिरहन आवश्यक छैन । तामाङ “प्राकृतिक मानव समूह” हो भन्नेमा स्पष्ट हुन अत्यावश्यक रहेको छ ।